Beautify keung wa: October 2011
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 1:34 AM0comments
ချင်းမြေလွှာသို့ ကြွလှမ်းခဲ့သည့် နေ့ရက်များ
နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာ ပညာရည်နို့သောက်စို့ပြီးကြသော
ကျောင်းသားတို့သည် တောင်တန်းသာသနာပြုတာဝန်ကို အမိတက္ကသိုလ်၏တာဝန်ပေးမှုဖြင့်
၂၀၀၅-ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်ပြီးဆုံးကြသော ကျောင်းသားတို့သည် မိမိတို့တာဝန်ကျရာ
တောင်တန်းမြေလွှာအသီးသီးသို့ (၂၁-၁၂-၂၀၀၅)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ သာသနာပြုတာဝန်
ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု ကျောင်းသားအားလုံးတို့က အမိန့်စာလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။
စာရေးသူအပါအ၀င် သီတင်းသုံးဖော် အရှင်ဥာဏိန္ဒ(သီပေါ)နှင့် အရှင်ဇာဂရရဟန်းတော်သုံးပါးတို့သည်
မိမိ၏သီတင်းသုံးဖော် နှစ်ပါးက ဖားစင်နှင့်ရှင်မဒိန်သာသနာပြုဌာနတို့မှာ
ဘ၀ကံကြမ္မာ၏စီမံရာ လောကဓံဇာတ်ခုံပေါ် မိမိတို့က , ပြရတော့မည်။
မိမိတို့သည် သြ၀ါဒ ခံယူပွဲကို တက်ရောက်ကြပြီး ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ သာသနာ့ပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်
မိမိတို့ တောင်တန်းခရီးစဉ်ကို လမ်းခရီးကျွမ်းကျင်သူများထံ မေးမြန်းရသည် မှာ အမောပေါ့...။
အသိကြောင့် လမ်းခွဲလို့ ဖြာဆင်းစိးသွယ်လာသော မျက်ရည်ပုလဲလုံးတို့သည်
နေခြည်နုထွေး သန်းလာသဖြင့် ပန်းမာန်တို့သည် ငုံဖူး၍ ပွင့်လာပြီး
ဆောင်းနှင်းဖွေးဖွေး အလှတို့ကို ချယ်ရီ သဇင်ပန်းတို့က သြဘာပေးနေသည့်အတွက်
လူ့လောက၌ မည်သူ့မဆိုရှေးအတိတ်က ပြုခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခဲ့လျှင်
ထို့ကြောင့်လူတို့၏ဘုန်းကံကို မျက်စိဖြင့် မမြင်သာသဖြင့်
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:01 PM0comments
သူကြီးမဖြစ်ခင် အထိ အလွန်းဆိုးခဲ့ဖူးသည်။
လူဆိုသည် စာပေကြောင့် ဘ၀ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
သို့သော် ဦးအုန်းဖေသည် သူကြီးဖြစ်သည့်အချိန်မှစပြီး နေ့စဉ်မှတ်တမ်းဒိုင်ယာရီရေးသည်။
အသက်(၇၀)ကျော်မှာ ပရဟိတ အကျိုးအတွက် ပခုက္ကူတွင် အခမဲ့စာကြည့်တိုက် တစ်တိုက်
ပြည်သူဖတ်ကြဖို့ အခခဲ့စာကြည့်တိုက်တို့ကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပြီး လှုဒါန်းခဲ့သည်...တဲ့။
သူ့စိတ်ဓာတ်သူ့စေတနာဟာ စာပေမှ စီးဆင်းလာခဲ့သည်မှာယုံမှားဖွယ်မရှိ။
နောင်လာနောင်သား များအတွက် အတုယူစရာဖြစ်အောင်ပရဟိတအကျိုးကိုထမ်းရွက်ခဲ့သည်။
ဦးအုန်းဖေလိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ မြို့ရွာတိုင်းမှာ ရှိလျှင်ကောင်းမှာပဲဟု တွေးမိသည်။
သားလည်း စာပေ၏အနှစ်သာရကို သဘောပေါက်လို့အမေ့နှလုံးသားဆန္ဒကို ဖြည့်ရင်း
ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေမှာ အမေ့ရွာ စာပျိုးခင်း လူငယ်စာကြည့်တိုက်ဆိုပြီး
ရွာမှာ စာကြည့်တိုက်တည်းဟူသော ဆီမီးတစ်တိုင်သည် ရွာသူရွာသားတို့၏နှလုံးသားကို
ထွန်းလင်းထောက်ပစေပြီးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ ဟု သားဆန္ဒပြုပါရဲ့အမေ...။
စာကြည့်တိုက်သည် စာဖတ်သူဆန္ဒကို အစွမ်းကုန်ကူညီလိုက်လျောသောကြောင့်
စာအုပ်များကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်သော အခွင့်ပေးထားရကား
စာကြည့်တိုက် အင်္ဂါ(၅)ရပ် ဘီငါးလုံးရှိမှစာကြည့်တိုက်က အသက်ဝင်ရှင်သန်နိုင်မှာလေ....။
၅။Budget-စာအုပ်တွေ အသစ်ဝယ်ဖို့ အခွန်အခ သုံးစရာ ရံပုံငွေပြည့်စုံရမည်။
ဒီငါးချက်ဟာ စာကြည့်တိုက်တစ်တိုက်၏ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ အခြေခံအုစ်မြစ် များသာ ဖြစ်သည်။
အုတ်မြစ်မခိုင်ရင် ရေရှည်မှာဘယ်အရာမှ မတည်မြဲပါ။
အမေစာကြည့်တိုက်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။စာကြည့်တိုက်သည် အမြည်းသဘောရွေးချယ်ဖတ်ရူနိုင်သောကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ် အတွက် စာရွေးတတ်လာအောင်
စာကြည့်တိုက်သည် ပြည်သူတို့၏အကျိုးအတွက် ထမ်းဆောင်ပေးရာ ဗဟိုဌာနကြီးလည်းဖြစ်သည်။
သို့အတွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ပန်းဦးတောင်ရွာမှာ (mother's native of library)အမေ့ရွာစာပျိုးခင်း
ဘ၀တက္ကသိုလ်မှာ သင်ယူစရာ လေ့လာစရာ အတုယူစရာ က အလွန်များပြားပြီး လောကဓံပင်လယ်လှိုင်းကြားက သူသူ ငါငါ အရှုံးမပေးသောဇွဲဖြင့်
ကိုယ်လိုရာပန်းတိုင် ခရီးသို့ ရောက်အောင်သွားနိုင်ကြပါစေ...။
(အမေ့နှလုံးသား ဟူသော ဆောင်းပါးလေးသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပန်းဦးတောင်ရွာ အမေ့ရွာစာကြည့်တိုက်တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာပေဟောပြောတွင် ရေးသားခဲ့သော စာမူဖြစ်သည်။)
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:16 AM0comments
စာအုပ်များမှာ တိုးတက်ကြီးပွားလိုသူ သူဌေးဖြစ်လိုသူတို့၏ အရင်းအနှီးလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။
လက်သမားတစ်ယောက်သည် ဆူးဆောက်တည်းဟူသော ပစ္စည်းကောင်းများ
စာမဖတ်သော သူတစ်ယောက်သည် တိုးတက်ကြီးပွားလာနိုင်သူတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပါ...။
ဗဟုသုတမရှိလျှင် ပရဟိတ စိတ်ဓာတ်လည်းမမွေးမြူနိုင်ပါ...။
စာပေကိုလေ့လာပါ။မှတ်သားပါ။ရှာဖွေပါ။ဖတ်ပါ ဟု ဆရာဖေမြင့်က တိုက်တွင်းစကားကို
လူသည် မနက်ထက် ညမှာ ပညာပိုရှိသည်။ မနေ့ကထက် သည်ကနေ့ အသိဥာဏ်သာရမည်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဦးနှောက် အလေးချိန်ပိုကြီးလာရမည်..။
တစ်နည်းသာရှိသည်။ စာဖတ်ပါ။ ဒါပဲ...တဲ့။
ဘ၀အတွက်မှာ လမ်းညွန်တာက အတိုဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးပါပဲ...။
စာဖတ်မှ မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်နွေးထွေးမှုနဲ့သမိုင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းတို့ကို သိလာမည်။
နောက်ပြီး ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး မဂ္ဂဇင်ဂေါ်ဂီ(၁၈၆၈-၁၉၃၆)က ကျွန်တော်တို့က
စာပေတွေကို ဖတ်လေလေ စာအုပ်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ကမ္ဘာကြီးနဲ့ပိုမိုနီးစပ်အောင် လုပ်ပေးလေလေ..။
ဘ၀ဆိုတာ ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်လေလေဖြစ်ပါတော့တယ်လို့ ရေးခဲ့ဖူးသည်။
စာပေကိုမဖတ်ရင် စာအုပ်နှင့် ပိုဝေးမည်။
ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဝေးမှတော့ မိမိဘ၀ရှင်သန်ခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိသလိုပါပဲ....။
လူသားသည် မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထာဝရ ထိတွေ့နေရမည်။
ပတ်ဝန်းကျင် က ပေးတဲ့ပညာ၊အသိစသဖြင့် ကမ္ဘာ့တက္ကသိုမှာ
ုတစ်ဖန် ဂရိကဗျာစာဆို ဟိုးမားဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်က
သင်ဟာ စာဖတ်ခြင်းကို မနှစ်သက်၊၀ါသနာမပါဘူးဆိုရင် ဘယ်သောအခါမှ
ဘ၀တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအတွက် သင်စရာ လေ့လာစရာများ
စာပေ၏အနှစ်သာရ စာပေ၏တန်းဖိုးကို လူတိုင်းလက်ခံမည်ဆိုလျှင်....
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:03 PM0comments
ဘ၀တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားနေကြသည့်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက်
သု၊စိ၊ပု၊ဘာ၊၀ိ၊လိ၊သိ၊ဓာ ၊အက္ခရာစွဲသုံး ဤရှစ်လုံးကို သီကုံးပန်သွင် နေ့တိုင်းဆင်လော့...။
အထက်ပါကဗျာအတိုင်း ပညာကို လိုလားကြသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက်
စနစ်တကျ လိုက်နာဆောင်ရွက် မည်ဆိုလျှင် ဘ၀တက္ကသိုလ်က ပေးထားသောမေးခွန်းကို
ဤစကားလုံး(၈)လုံးကို ပန်းကုံးသဖွယ်သီကုံးပြီးနေ့တိုင်းပန်ဆင်ပေးပါလို့ သြ၀ါဒစကားပင်ဖြစ်သည်။
ဘ၀တက္ကသိုလ်မှာ ပညာကိုရှာဖွေရင်း အမေပျိုးထားခဲ့သည့်စာပေပျိုးခင်းဖြင့်
အမေ့နှလုံးသားက ကမ္ဘာကြီးကို ငြိမ်းချမ်းစေချင်သည်၊ပျော်ရွှင်စေချင်သည်မဟုတ်ပါလား...။
သည့်အတွက် စာပေအလင်းရောင်ဖြင့် သား၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေပါ့မည်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:59 AM0comments
ဆီမီးတစ်တိုင်သည် အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်နိုင်သည်။
ထို့အတူ စာကြည့်တိုက်ဟူသည်လည်း မိမိ၏ဘ၀အမှောင်ကိုပယ်ခွင်း၍
စာပေတည်းဟူသော အလင်းရောင်သည် ညချမ်းအခါ၌ ငွေလရောင်နှင့်ဆင်တူသည်။
လရောင်ကင်းမဲ့သောညသည် မတင့်တယ်။စာပေကင်းမဲ့သောလူ့ဘ၀သည်လည်း မတိုးတက်နိုင်။
စာမဖတ်သောသူသည် ဗဟုသုတပညာကို မရရှိနိုင်ပါ။
သည်အတွက် စာဖတ်မှ အလင်းရောင် ပိုရမည်။
စာပေကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလို့ ဘ၀အသိဥာဏ်များရင့်ကျက်မည်။
ဗဟုသုတတိုးပွားလာမည်။ဤအကျိုးတို့သည် စာပေ၏ကျေးဇူးကြောင့် သိလာရခြင်းဖြစ်သည်။
ထာဝရကျောင်းတော်သား ကျောင်းတော်သူတွေချည်းပါပဲ လို့
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြောခဲ့ဖူးသည်။
ဒါဆို သားတို့က ထာဝရကျောင်းသားတွေပါပဲ..
အမေက ဆရာ၊ သားတို့က ကျောင်းသား...။ဘ၀တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းမှာ
စာကြည့်တိုက်သည် အတန်းမရှိသော ဘ၀တက္ကသိုလ်တစ်ခုလို့ တွေးမိသည်။
စာကြည့်တိုက်မှာ ရှိသော စာပေဟူသမျှ တို့သည် ဘ၀အတွေ့အကြုံ(သင်ခန်းစာ)များသာ ဖြစ်သည်။
စာအုပ်များ စုဆောင်းရာ စာကြည့်တိုက်ကို ဘ၀ဇာတ်ခုံဟု
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:40 PM0comments
ယောင်္ကျားတို့ဓမ္မတာနှင့်အညီ ပျော်ရာမနေ တော်ရာမှာနေပြီး
ရရှိပြီးတဲ့ဥစ္စာတွေကို ခြများတောင်ပို့ဖို့ပုံနှင့် ပျားများ ပျားလဘို့လုပ်ပုံတို့ကို
သည့်အပြင် လူ့လောက၌ မရှိမဖြစ်တတ်မြောက်ထားသင့်သော ပညာဗဟုသုတ
ဤလောကကြီး ပညာသင်လို့ မပြီှးဆုံးနိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်...။
မိမိဟာ လောကကြီးရဲ့ထာဝရကျောင်းသားဖြစ်လို့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ဒါပဲလားလို့
စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်...
တင်လျှက်လုပ်ကျွေး၊ မပြတ်မွေးလည်း ကျေးဇူး ဂုဏ်စိုင်
လူ့လောကတွင် ကိုယ့်ကိုမွေးပေးသော မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကာ ကြီးမားလှတယ်...။
ထိုကျေးဇူးကို ဆပ်ဖို့အဘကိုလက်ျာပခုံး အမိကို လက်ဝဲပခုံး တင်ပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ရာလုပ်ကျွေးသော်လည်း
ဒါကြောင့် မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကို တက်နိုင်သလောက် တုန့်ပြန်သင့်တယ်
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 1:12 AM2comments
To be use of in the world
is the only way to be happy.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:17 AM0comments
of success but rather try to becomeaman of value.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:02 AM 1 comments